Ingabe iDisney Plus iphansi? Hlola Isimo Seseva Njengamanje - Ungakwenza Kanjani
Ingabe iDisney Plus iphansi? Hlola Isimo Seva Esibukhoma
Ngabe iDisney Plus iphansi? Uma kunjalo, kungokwakho kuphela noma kuwo wonke umuntu? Uma uzama ukuxhumana neDisney Plus futhi iseva iyehla kungenzeka kube inkinga ohlangothini lwakho noma ngohlelo lwakho lokusebenza.
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe iDisney Plus iphansi?
Lapha sibhale izindlela ezi-2 zokuhlola ukuthi ngabe i-disney plus ikwenzele wena noma wonke umuntu.
Imihlahlandlela Eminingi Ekuhloleni Kwesimo Seseva:
Ingabe iNetflix iphansi manje?
Ingabe i-Youtube iphansi? Hlola Isimo Esibukhoma
Ungazama lezi zinyathelo eziyisisekelo uma uqinisekile ukuthi iDisney Plus ayenzelwe wena kuphela kodwa nawo wonke umuntu.
Dlula ku-akhawunti ye-Disney Plus Twitter ukuze uhlole izibuyekezo eziphathelene nezinsizakalo
Into yokuqala okufanele uyenze ukuhlola i-akhawunti ye-Disney Plus Twitter yazo zonke izibuyekezo zakamuva
Manje sesha i-Twitter ukuthola #ukulele . Uma iseva ingaphansi kwawo wonke umuntu khona-ke ngisho noyedwa wabo uzothumela i-tweet ku-akhawunti noma axoxe ngesimo sokungasebenzi kweDisney Plus.
Uma ungeke ukwazi ukubona i-twitter ungaya ku-google noma eminye imithombo eku-inthanethi futhi uma ungakwazi nokuyifinyelela lapho-ke inkinga kufanele ibe seceleni kwakho. Kulokhu unga try amanye amawebhusayithi angahlola isimo sakho.
Amanye amasayithi afana nalawa yi-Downforeveryone noma i-justme, iDowndetector, ne-isitRightnow? Lawa masayithi azokwazisa ngesimo sangempela seDisney Plus.
Okufanele Ukwenze Uma ungakwazi ukuxhuma ku-Disney Plus?
Manje ake sihlole ukuthi yini okufanele uyenze uma inkinga ivela ohlangothini lwakho kodwa hhayi kwabanye.Kunamaqhinga amaningi ongaxazulula kalula ngawo udaba lwakho futhi iDisney Plus izobe isesimweni sokusebenza.
Kufanele uqiniseke ngewebhusayithi yangempela i.e. https.//www.disneyplus.com
Uma ungeke ukwazi ukufinyelela kuwebhusayithi ungazama uhlelo lokusebenza lweDisney Plus, futhi uma nalokhu kungasebenzi, ungabheka iziphequluli ku-smartphone yakho.
Futhi, ungabheka ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi futhi uma konke kuhamba kahle bese uvala iwindi namawebhusayithi iminithi eli-1 bese ulivula bese uzama ukufinyelela kwisiphequluli futhi. Into efanayo ongayenza ngohlelo lwakho lokusebenza, qala ngokuluvala bese uphinde ulivule ngemuva komzuzu noma emibili.
Qiniseka ukuthi ugcina isilondolozi sesiphequluli sakho singenalutho
Kufanele futhi ugcine amakhukhi wesiphequluli sakho ahlanzekile
Zama ukuqala kabusha idivayisi yakho
Kungaba nenkinga ku-DNS Server ukuze ukwazi ukuyivula, kepha kufanele ube nolwazi oluphelele ngayo
Uma konke kuhamba kahle ngewebhusayithi yakho ye-Disney Plus kanye nohlelo lokusebenza bese ubheka ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi. Vele ucele usizo nge-ISP yakho.
Ithiphu ebalulekile: Uma ngabe isiza sakho noma uhlelo lwakho lokusebenza lungasebenzi futhi lilengisiwe ungaqala kabusha idivayisi yakho
Imilayezo Yephutha leDisney Plus:
IDISNEY PLUS ingabonisa izinhlobo ezithile zamaphutha njenge-500 Internal Server Error, 403 enqatshelwe futhi ama-404 angatholakali. Manje ake sibone amanye amaphutha ayisisekelo: -
Ikhodi Yephutha 4-9 -Lokhu kwenzeka lapho imininingwane ye-akhawunti ingalungile. Ngakho-ke, qiniseka ukubeka yonke imininingwane efanele mayelana nokungena nokukhokha
Ikhodi Yephutha 13 -Lokhu kukhombisa ukuthi kuningi kakhulu abangene ngemvume vele kumadivayisi ahlukile.
Ikhodi Yephutha 31 no 73 -Lokhu kwenzelwa inkinga yendawo. Uma uzama i-aft5er VPN lapho-ke ngeke ukwazi ukuyifinyelela. Ngakho-ke, vala i-VPN
Iphutha lama-41 nelama-42 -Kungaba nephutha lokudlala kulokhu lapho iDisney Plus ingahle ilayishwe ngokweqile. Ngakho-ke, zama futhi emuva kwesikhathi
Iphutha 83 -Lokhu ukuxubana okuyisisekelo kwawo wonke amaphutha athi iDisney Plus inezinkinga ezithile ngakho linda isikhashana bese uyibona ngemuva kwalokho
Uma kwenzeka inkinga yakho ingaxazululwa ngazo zonke lezi zixazululo ukhululekile ukushayela inombolo yocingo yosizo 888-905-7888. Lokhu kwenzeka lapho iDisney Plus isiphezulu futhi ikhombisa lolu hlobo lwemiyalezo yamaphutha.
Ngakho-ke ekugcineni siphetha ngokuthi kungaba khona inkinga evela ohlangothini lwakho kanye nakuDisney Plus ngakho-ke kungcono ukuzihlola zombili. Uma i-Disney Plus ingaphansi kwawo wonke umuntu ungabheka isibambo se-Twitter seDisney. Uma inkinga kuzoba ngeyawo wonke umuntu khona-ke othile ngabe ubeluthumele udaba ku-Twitter. Uma kuvela eceleni kwakho ungabheka ikhambi elingenhla ukuxazulula inkinga yakho.
Bangaki Abantu Abangabukela iDisney + ngasikhathi sinye?
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Se-TV Student?
Ungayibuka Kanjani iDisney Plus KuRoku?
Ama-21 + Ama-Subddits Ahamba Phambili Okufanele Uwalandele (2020)
Izindlela ezihamba phambili zeCamScanner ngo-2020
Ungayithola Kanjani iRobux yamahhala ngo-2020?
Ungayibuyisela Kanjani Imali Kumdlalo ku-Steam?
Amakhodi we-Pokemon Go Promo (2020) - Ungawathola Kanjani Futhi Uwasebenzise?
I-Putlocker Alternatives (2020) - Ukusakazwa kwamahhala okungenamkhawulo
usakaza ama-movie amasha mahhala
kungani ngingalanda itunes kumawindi 10
bukela ama-movie alandiwe ku-inthanethi mahhala
ungayinyusa kanjani inqama ku-minecraft
ungasusa i-instagram yakho